आधुनिक सामान फर्नीचर वस्तुहरू र सामान को एक किसिम मार सक्षम। तपाईं आज अपार्टमेन्ट र उपनगरीय घरमा के देख्न थिएन!
Frameless कुर्सी - मूल भित्री विस्तार
फर्नीचर को असामान्य वस्तुहरू बीच झन् आधुनिक उपभोक्ता relished कि frameless फर्नीचर छन्। हामी पहिलो तिनीहरूलाई बसे गर्नेहरूलाई जित्न उनको धोक्रे यस्तो सीट भेट्दा आश्चर्य। यो कुर्सी बसेर भावना विवरण निर्धारण - झोला शरीर को सही स्थिति लिन्छ र मालिक द्वारा सही किनभने यो एउटा निरपेक्ष सान्त्वना छ।
के मात्र विकल्प मूल कुर्सी लगाएका छैनन् हो! कुल, तुर्क, नासपाती वा झोला। यी उत्पादनहरू छोराछोरीको कोठा र युवा आंतरिक लागि आदर्श हो। ठूलो महत्व छ, नासपाती-कुर्सियों लागि फिलर चयन गरिनेछ। यो पर्यावरण सुरक्षा मालिक, उत्पादन वजन र स्थायित्व को सुविधा निर्भर गर्दछ। सीट भरिएको? सामाग्री को एक किसिम को कुन संस्करण चयन गर्न? निर्णय खरीदार गरेको छ।
प्राकृतिक fillers। र बेफाइदा
कृत्रिम प्रशस्त देखि सार्न टाढा र जो खोजिरहेका शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास, आफूलाई मात्र वातावरण मैत्री वस्तुहरू चारै ओर गर्न चाहनुहुन्छ प्राकृतिक सामाग्री रुचाउँछु। नासपाती-कुर्सियों लागि यी फिलर विभिन्न संयोजन मा प्रयोग गरिन्छ
काठ चिप्स। softwood चिप्स (देवदार, सल्ला), निको पार्ने aromas exudes र नजिक कृंसम्म किरा रोक्छ जो प्रयोग गर्न लाभप्रद। तर भौतिक होसियार चयन आवश्यक र अन्ततः यो राम्रो sawdust, आफ्नो उपस्थिति गुमाउनु र मात्रा दिन छैन, जो मा उत्तेजित गर्दछ।
Fluff कलम संग मिश्रित। भौतिक ज्योति हो, तर समय संग बन्द हुन्छ। किनभने यो एलर्जी प्रतिक्रिया अक्सर गराउँछ चरम सावधानी, fluff प्रयोग गरिन्छ। र भिजेको फिलर जो सबैले लिङ्कमा छ एक peculiar गंध, exudes त जब।
अनाज र दलहन - यो चामल, मटर, सिमी र पनि बदाम छ। तर, यस्तो उत्पादन वजन विशेषता द्वारा छन् जो frameless फर्नीचर सामग्रीहरू खान averse मुसा, को आक्रमण उजागर गर्दै छन्।
प्राकृतिक सामाग्री को नोकसान absorbability छ। निकाल्दै चिस्यान, नासपाती-कुर्सियों अङ्कुराउन गर्न सक्नुहुन्छ लागि फिलर, खरिद गर्न ढुसी लागेको, बासी गंध हुन्छन्। देश घरहरू वा अनियमित गरम परिसर मामलामा यस्तो सामाग्री को विचार परित्याग गर्न राम्रो छ।
कुर्सियों नाशपाती लागि फिलर - पोलीट्रीन
सबैभन्दा frameless फर्नीचर निर्माण को लागि लोकप्रिय इच्छित मात्रा सिर्जना जो कृत्रिम मोती, छन्। उत्पादन कुचल फोम भरिएको छ, लामो समय छैन सञ्चालन समयमा आकार गुमाउन गर्दैन। Polystyrene granules - कम वजन भएको लोचदार हावा गांठ foamed छ। आधुनिक प्रयोगकर्ता लाईक उत्पादन जहाँ नासपाती-कुर्सियों लागि फिलर सजिलै एक मानव आकृति परिवर्तन, इच्छित आकार हुन्छ। यस्तो फर्नीचर व्यक्तिगत हाडजोर्नी प्रभाव अनुमति दिन्छ। शरीर आराम गर्न अनुमति दिने, गुणस्तर फिलर मालिक clumsily को कुर्सी मा गिरावट अनुमति गर्दैन, र एक सहज स्थिति दिने, संख्या अङ्कमाल जो बादल को प्रभाव, छ।
कृत्रिम फिलर को लाभ
कारण को लाभ गर्न झोला-pouf खरीदार सामान कृत्रिम सामग्रीको लागि रोजेका फोम polystyrene, जो frameless फर्नीचर लामो समय को लागि आफ्नो आकार पनि कायम रहन्छ। तिनीहरूलाई यो सामाग्री के आकर्षित?
पर्यावरण सुरक्षा granules जो विषाक्त पदार्थ फेंकना छैन।
Termosohranyayuschimi उत्कृष्ट गुण छ।
यो सजिलो, किनभने उत्पादन मात्रा सजिलै सारियो र बच्चा।
यो पसिना, चिस्यान र माटो अवशोषित छैन, त्यसैले कोठा चिस्यान यो भयानक छ।
मुसा र vermin गर्न आकर्षक।
अविनाशी, र कम दबाव सजिलै replenished।
कसरी लामो गर्नुपर्छ कुर्सी-नासपाती लागि फिलर
यसलाई मालिक pouf आफ्नै समय कम विस्तृत को मात्रा पूरक गर्न सजिलो छ फोम मोती। बिक्री polystyrene मोती 100 लिटर को प्याकेजहरू मा बेचिन्छ। तर कुर्सी-नासपाती लागि फिलर प्रयोग आफ्नै मौलिक फर्नीचर बनाउन निर्णय गर्ने खरिदकर्ताहरूको लागि। 300 लिटर - यो न्यूनतम आवश्यक तत्संबंधी मात्रा हो। किनभने प्रकाश granules oversleeping संग inhaled गर्न सकिन्छ यो केवल आफ्नो उत्पादनहरु प्राप्त गर्दा सुरक्षा नियम पालन गर्न आवश्यक छ। मोती एक भ्याकुम क्लिनर संग टाढा छरिएका हुन सक्छ।
फर्नीचर परिवारमा प्रसन्न हुनेछ आफ्नै हात टुक्रा सिर्जना, यसको सजिलो र सुविधा बच्चाहरु र वयस्क गर्न अपील गर्नेछ। बेडौल कुर्सी, हातमा द्वारा सिर्जना, घर सजाउनु। विशेष frameless फर्नीचर मात्र होइन सान्त्वना दिन हुनेछ, तर पनि मालिकहरूको स्वाद accentuate गर्न।
तपाईंको आफ्नै हातमा कसरी Lamellar कवच बनाउन
द्वि-क्सीनन हेडलाइट्स - यो के हो? को द्वि-क्सीनन headlamps स्थापना
एलेना पोटानिना: प्रसिद्धि र लोकप्रियताको लायक!
महिनावारी समयमा रगत थक्के - हामी चिन्ता गर्नुपर्छ?
रगतमा ESR। सामान्य महिला: माथिल्लो र तल्लो सीमा। वृद्धि कारणहरू